ပို့စ်တင်ချိန် - 6/18/2014 11:12:00 AM
1. အကြောင်းအရာက "ယာမ" ပါ။ ကျနော့် သူငယ်ချင်းတွေ ဆေးသုံးပြီး စာတွေကျက်တယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ကတော့ စာတွေ ညသန်းခေါင်ကျော်ကျော်ထိ လုပ်နိုင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါမှန်သလား။ အောင်သွားတဲ့ သူတွေတော့ ရှိပါတယ်။ မအောင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျနော်သိချင်တာက အဲဒီဆေးအကြောင်းပါ။ သူက ညတစ်ညလုံးတော့ မအိပ်ဘူး။ ဥပမာ ညနေ ၂ နာရီလောက်မှာ ဆေးသုံးထားတယ်ဆိုရင် အဲဒီည မအိပ်ဘဲနေတယ်။ အာရုံကလည်းတစ်ခုပဲလို့ ပြောတယ်။ တကယ်ဟုတ်သလား။ နောက်နေ့ ၂ နာရီလောက်မှာ တအားအိပ်ချင်တယ်တဲ့။ အိပ်လည်းအိပ်တယ်။ ပြီးရင် မသုံးရရင်လည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့။ အရင်လိုပဲတဲ့။ မစွဲဘူးတဲ့။ သုံးလိုက်ရင် ပေါ့သွားတယ်တဲ့။ တကယ်မစွဲဘူးလား။ ဒီဆေးကိုသုံးလို့ ဦးနှောက်ရဲ့ ဘယ်အပိုင်းတွေကို ထိခိုက်သွားလဲ။
2. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပညာပေးဆောင်းပါး မရှိသလောက်နည်းပါးသည့် YaBa ဆေးပြားခေါ် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများ၏ ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုးများကို ရေးသားဖော်ပြပေးရန်တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေဝင်ဖြောင့်သူတိုင်း အသုံးပြုနေကြပါသည်။ ကျွန်တော်အပါအဝင် သူငယ်များစွာလည်း ရံဖန်ရံခါ သုံးစွဲကြပါသည်။ ထိုဆေးပြား၏ ဆိုးကျိုး ကောင်းကျိုးကို မြန်မာစာဖြင့်ရေးသားထားသည်ကို အွန်လိုင်းတစ်ပုဒ်သာရှိပါသည်။ YaBa & methamphetamine တို့၏ ဆိုကျိုးနှင့်ကောင်ကျိုး အကြောင်းကို တိကျစွာခွဲခြားနားလည်းလိုပါသည်။ ကောင်းကျိုးဟုထည့်ပြီးမေးရခြင်းမှာ ကျွန်တော်အပါအဝင် သူငယ်ချင်းများဟာ ခဏခဏငြင်းခုံကြပြီး ဖြတ်မယ်နားမယ် မဖြတ်ဘူးမနားဘူး အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရအုံးမယ် စသဖြင့်အကြောင်းပြပြီး ဆက်လုပ်မယ့်သူရော အကြောင်းမပြပဲ ကြုံတဲ့အခါလုပ်မယ်ဆိုသူဆို ဒီလိုနဲ့ပဲ နေ့မခြားလောက်အောင်ကို ကြိုက်နှစ်သက်နေကြပါသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင် မလုပ်တော့ဘူးဟုဆုံးဖြတ်ထားသော်လည်း သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆုံလျှင် လုပ်ချင်စိတ်ထိမ်းမရသည်များ ခဏခဏကြုံလာသည့်အတွက် ဆရာ၏ ရှင်းလင်းရေးသားမှုကို စောင့်မျှော်နေပါမည်ခင်ဗျား။
"စိတ်ကြွဆေး" ဆိုတာတွေဟာ CNS ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အပေါ် သက်ရောက်စေတဲ့ အမျိုးမျိုးသောဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။ "ယာဘ" လို့လူသိများတဲ့ Amphetamines (မင်မ်ဖက်တမင်း) ကို စဖေါ်စပ်ခဲ့တာက ၁၈၈၇ ကတည်းကဖြစ်တယ်။ လူကနေ အလိုလို ထုတ်ပေးနေတဲ့ Adrenaline နဲ့ Noradrenaline တွေနဲ့တူတယ်။ (ရှော့ခ်) ရတာ၊ ပန်းနာထတာတွေအတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ အသက်ကယ်ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။ ရင်ကျပ်လို့ပေးတဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးထဲမှာ ထည့်ထားတတ်တယ်။